စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ - Investing stock online
Last Updated: ဇွန်လ 12 2018
အဆိုပါစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ ( “ သတ်မှတ်ချက်များကို” ) 103 Sham ဖုန်ကြားရှင် Tong ပလာဇာ, ဗစ်တိုးရီးယား, မာဟေး, ဆေးရှဲဘယ်လို investingstockonline.com ဖော်ပြရန် ( “ ကုမ္ပဏီ” , “ ကျွန်တော်” နှင့် “ ကျွန်တော်တို့ရဲ့” ) ဒီ website ကိုသင့်ရဲ့အသုံးပြုမှုကိုထိန်းညှိ https://www.investingstockonline.com/ (ဆိုက်ကို “ ဟု)” ။ ဆိုက်သင့်ရဲ့အသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အလေ့အကျင့်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အောက်ပါအချက်အလက်များကိုသေချာစွာဖတ်ပါ။ အဆိုပါကုမ္ပဏီအချိန်မရွေးစည်းကမ်းချက်များကိုပြောင်းလဲစေလိမ့်မည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီဆက်သွယ်ရေး၏ရရှိနိုင်နည်းလမ်းများသုံးပြီးသတ်မှတ်ချက်များပြောင်းလဲမှုသင်အကြောင်းကြားလိမ့်မည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်၎င်းတို့၏ယခင်ဗားရှင်း၏အမှန်တကယ်ဗားရှင်းကြည့်ဖို့မကြာခဏဆိုက်ကိုစစ်ဆေးရန်သင့်အားအကြံပြုသည်။
သင်တစ်ဦးဥပဒေရေးရာ entity ကိုယ်စားပြုလျှင်, သင်ကသင်ကိုယ်စားပြုတရားဝင်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်သတ်မှတ်ချက်များကိုကောက်ချက်ချဖို့ထိုကဲ့သို့သောဥပဒေရေးရာ entity ခြင်းဖြင့်ခေါင်းစဉ်ကြောင်းသက်သေခံပြီးဖြစ်သည်။
ဆိုက်ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ [သငျသင့်အကောင့်၏လျှို့ဝှက်ချက်များ, စကားဝှက်နှင့်အခြားအထောက်အထားများသေချာဘို့နှင့်သင့် device ကိုမှလုံခြုံ access ကိုတာဝန်ရှိသည်ဖြစ်ရလိမ့်မည်။ သငျသညျမညျသူမဆိုမှသင့်အကောင့် assign မရကြလိမ့်မည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီအသင့်အကောင့်၏အလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်ခိုးယူခြင်းမှရလဒ်များကြောင့်သင့်အကောင့်မှခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဝင်ရောက်ခွင့်တာဝန်ရှိသည်မဟုတ်ပါ။ အဆိုပါကုမ္ပဏီငြင်းဆန်သို့မဟုတ် cancel ဝန်ဆောင်မှု, သင့်ရဲ့အကောင့်ကိုအဆုံးသတ်ခြင်းနှင့်ဖယ်ရှားလိုက်ပါသို့မဟုတ်ပြင်ဆင်ရန်အကြောင်းအရာပေမည်။
အဆိုပါကုမ္ပဏီသိလျက်အသက် 16 နှစ်အရွယ်မှာ (တဆယ်ခြောက်) အရလူပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းမထားဘူး။ သငျသညျ (တဆယ်ခြောက်) 16 နှစ်အောက်နှစ်ရှိပြီဖြစ်တယ်ဆိုရင်, သင်ဆိုက်ကိုမသုံးစေခြင်းငှါနှင့်မည်သည့်အခြေအနေများအောက်တွင်စည်းကမ်းချက်များသို့မဝငျနိုငျသညျ။
ကျနော်တို့ may ကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ခုတည်းသောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်, သင်တို့အဘို့ဆိုက်ကိုအသုံးပြုအခကြေးငွေထားကြ၏။ အားလုံးစျေးနှုန်းများဆိုက်ပေါ်တွင်သက်ဆိုင်ရာစာမျက်နှာများပေါ်တွင်သီးခြားစီထုတ်ဝေလျက်ရှိသည်။ ကျွန်တော်တို့သည်ကိုယ်တစ်ဦးတည်းဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်, မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုအခကြေးငွေကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။
ငါတို့သည်လည်းသူတို့ရဲ့ကော်မရှင်ရှိစေခြင်းငှါအရာ certified ရရှိထားပြီးပေးချေမှုစနစ်များကိုသုံးနိုင်ပါသည်။ သင်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ငွေပေးချေစနစ်အရှေးခယျြရသောအခါဤသို့သောကော်မရှင်သင်တို့အပေါ်မှာဆိုလိုနိုင်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောငွေပေးချေမှုစနစ်များကော်မရှင်အကြောင်းကိုအသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်ကို၎င်းတို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များအပေါ်တွေ့နိုင်ပါသည် ..
ဆိုက်ကတခြားဆိုဒ်များ, application များနှင့်ပလက်ဖောင်း (လျှော့က “ လင့်ခ်လုပ်ထားသောဆိုဒ်များ” ) မှလင့်များပါဝင်နိုင်သည်။
အဆိုပါကုမ္ပဏီသည်လင့်ခ်လုပ်ထားသောဆိုဒ်များကိုထိန်းချုပ်မထားဘူး, နှင့်အကြောင်းအရာနှင့်ဆက်စပ်မှုဆိုဒ်များ၏အခြားပစ္စည်းများအတွက်တာဝန်ရှိသည်လွတ်လိမ့်မည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီဆိုက်ပေါ်တွင်လုပ်ဆောင်ချက်ကိုသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများပေးဘို့သင့်ကိုဤလင့်ခ်မရရှိနိုင်စေသည်။
တားမြစ်ထားသောအသုံးပြု Intellectual Property
အဆိုပါကုမ္ပဏီအသင်သတ်မှတ်ချက်များကိုနှင့်အညီတစ်ဦးကိရိယာမှဆိုက်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သုံးစွဲဖို့ non-လွှဲပြောင်း non-သီးသန့်, ရုပ်သိမ်းခြင်းလိုင်စင်ပေးအပ်။
သငျသညျဥပဒေနှင့်မညီညွတ်သောသို့မဟုတ်တားမြစ်ထားသောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဆိုက်ကိုမသုံးကြလိမ့်မည်။ သင်, disable စေခြင်းငှါတစ်လမ်းအတွက်ပျက်စီးမှုကိုဆိုက်ကိုသုံးပါ, သို့မဟုတ်ဆိုဒ်အတွင်းဝင်ရောက်စွက်ဖက်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
ဆိုက်ပေါ်မှာရှိသမျှသောအကြောင်းအရာများကိုပစ္စုပ္ပန် (လျှော့နှငျ့ “ အကြောင်းအရာ” hereinbefore) ဆိုက်ပေါ်တွင်အသုံးပြုစာသား, code ကို, ဂရပ်ဖစ်, အမှတ်တံဆိပ်များ, ပုံများ, စုစည်း, ဆော့ဖ်ဝဲပါဝင်သည်။ အဆိုပါအကြောင်းအရာကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်ယင်း၏ကန်ထရိုက်တာများ၏ပိုင်ဆိုင်မှုသည်နှင့်ထိုကဲ့သို့သောအခွင့်အရေးကိုကာကွယ်ပေးကြောင်းဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုဥပဒေများကကာကွယ်ပေးခဲ့တယ်။ သင်ကအကြောင်းအရာတွင်ပါရှိသောအားလုံးမူပိုင်ခွင့်များနှင့်အခြားစီးပွားဖြစ်သတိပေးချက်များသို့မဟုတ်ကန့်သတ်သုံးစွဲဖို့သဘောတူသင်အကြောင်းအရာပြောင်းလဲနေတဲ့ကနေပိတ်ပင်တားမြစ်သည်။
သင်, ထုတ်ဝေရန် transmit, ပြုပြင်ခြင်းအင်ဂျင်နီယာ reverse, လွှဲပြောင်းတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်, ဒါမှမဟုတ်ဖန်တီးရောင်းလက်ရာများ, ဒါမှမဟုတ်မည်သည့်လမ်းအတွက်အကြောင်းအရာမဆိုမသုံးပါလိမ့်မည်။ ဆိုက်သင်၏ခံစားသည့်အကြောင်းအရာမဆိုတရားမဝင်နှင့်မြစ်တားအသုံးပြုမှုစေရန်သင့်အားခေါင်းစဉ်တပ်ရမည်မဟုတ်ခြင်းနှင့်အထူးသဖြင့်သင်ကအကြောင်းအရာထဲမှာစီးပွားဖြစ်အခွင့်အရေးများသို့မဟုတ်သတိပေးချက်များမပြောင်းရလိမ့်မည်။ သင်သာသင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့် Non-စီးပွားဖြစ်အသုံးပြုခြင်းများအတွက်အကြောင်းအရာကိုအသုံးမူလိမ့်မည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီကုမ္ပဏီ၏မူပိုင်ရန်သင့်အားဆိုလိုင်စင်ပေးသနားတော်မူခြင်းမဟုတ်ပါ။
, ကိုအပ်လုဒ်တင်တင် inputting, သင်ကုမ္ပဏီ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအပါအဝင်များ၏စစ်ဆင်ရေးနှင့် ဆက်စပ်. သင်၏ Content သုံးစွဲဖို့ကုမ္ပဏီပေးအပ်ပေမယ့်ကန့်သတ်မထားသင့်ရဲ့အကြောင်းအရာပေးအပ်ခြင်းသို့မဟုတ်တင်ပြခြင်းအားဖြင့်, ထုတ်လွှင့်ဖို့အခွင့်အရေး, လူသိရှင်ကြားပြသ, ဖြန့်ဝေ, လူသိရှင်ကြားလုပ်ဆောင်မိတ္တူ , မျိုးပွား, သင်၏အကြောင်းအရာဘာသာပြန်ဆို; နှင့်သင့်အကြောင်းအရာနှင့် ဆက်စပ်. သင်တို့၏နာမထုတ်ဝေဖို့။
အဘယ်သူမျှမလျော်ကြေးငွေသင့်ရဲ့အကြောင်းအရာ၏အသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. ပေးဆောင်ရလိမ့်မည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီအသငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုပေးပို့နိုင်ပြီးမည်သည့်အချိန်တွင်မသင်၏အကြောင်းအရာကိုဖယ်ရှားစေခြင်းငှါမဆိုအကြောင်းအရာထုတ်ဝေရန်သို့မဟုတ်ပျော်မွေ့စရာတာဝန်ယူရမည်။
, ကိုအပ်လုဒ်တင်တင် inputting, သင်ခိုင်လုံခြင်းနှင့်သင်သည်သင်၏အကြောင်းအရာဖို့အခွင့်အရေးအားလုံးပိုင်ဆိုင်ကြောင်းကိုယ်စားပြုသင်၏ Content ပေးသို့မဟုတ်တင်သွင်းခြင်းအားဖွငျ့ဖွစျသညျ။
အချို့သော liabilities ၏ Disclaimer
အဆိုပါကုမ္ပဏီရရှိမှု, တိကျမှန်ကန်မှု, ယုံကြည်စိတ်ချရ, သင့်လျော်ခြင်း, ပေါ်ပါရှိသောအကြောင်းအရာများ၏အချိန်မီနှင့်ဆိုက်ပေါ်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်န်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်. မပါကိုယ်စားပြုစေသည်။ သက်ဆိုင်ရာဥပဒေဖြင့်ခွင့်ပြုအများဆုံးအတိုင်းအတာအထိအပေါင်းတို့, ထိုကဲ့သို့သောအကြောင်းအရာနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအပေါ်ထောက်ပံ့ပေးနေကြသည်အခြေခံ “ ကဲ့သို့ဖြစ်၏” ။အဆိုပါကုမ္ပဏီအာမခံနှင့်ကုန်သည်များ, တယောရည်ရွယ်ချက်ကြံ့ခိုင်ရေး၏ပြဋ္ဌာန်းချက်များအပါအဝင်ဒီအကြောင်းအရာနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်. အားလုံးအာမခံနှင့်အခြေအနေများ, disclaims ။
သက်ဆိုင်ရာဥပဒေဖြင့်ခွင့်ပြုထားသောအမြင့်ဆုံးအတိုင်းအတာအထိမရှိဖြစ်ရပ်အတွက်ကုမ္ပဏီအပါအဝင်မည်သည့်တိုက်ရိုက်, သွယ်ဝိုက်စကားမစပ်, လက်ငင်းအကျိုးသက်ရောက်မှု, အထူး, ပြစ်ဒဏ်ခတ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်ထိုက်ရကြလိမ့်မည်, ဒါပေမယ့်ကန့်သတ်ဘဲ, ခံစား, ဒေတာသို့မဟုတ်အကျိုးအမြတ်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအတွက် အဆိုပါဆိုက်သို့မဟုတ်ယင်း၏န်ဆောင်မှုကိုခံစားဖို့နိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်နှောင့်နှေးများ၏အခြေအနေတွင်ဆိုက်၏ခံစားသို့မဟုတ်ကွပ်မျက်နှင့်အတူကွန်နက်ရှင်ဒါမှမဟုတ်ဆိုက်ကိုမဆိုအကြောင်းအရာသည်, သို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်ဆိုက်၏ခံစားထဲကပေါ်ထွက်လာသော, စာချုပ်အပေါ်အခြေခံမဟုတ်တဲ့ -contract တာဝန်ယူမှုသို့မဟုတ်အခြားအကြောင်းပြချက်။
ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအတွက်တာဝန်ယူမှုများဖယ်သို့မဟုတ်န့်အသတ်, လက်ငင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုသို့မဟုတ်ဖွစျပှားဖြစ်စေ, တစ်ဦးအထူးသဖြင့်အမှု၌တားမြစ်ထားသောနေတယ်ဆိုရင်, တာဝန်ယူမှုများဖယ်သို့မဟုတ်န့်အသတ်ကိုသင်လျှောက်ထားရမည်မဟုတ်။
သင်သည်သင်၏၏ခံစားသို့မဟုတ်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းထဲကနှင့်စပ်လျဉ်းသို့မဟုတ်ပေါ်ပေါက်မည်သည့်ကုန်ကျစရိတ်, ဆုံးရှုံးမှု, (ရှေ့နေများ ” အဖိုးအခအပါအဝင်) ကုန်ကျစရိတ်, liabilities အဘို့, အန္တရာယ်ကင်းကုမ္ပဏီ၎င်း၏မန်နေဂျာ, ဒါရိုက်တာများ, ဝန်ထမ်းများ, အေးဂျင့်များနှင့်တတိယပါတီများ, indemnify ကာကွယ်ရန်နှင့်ကျင်းပရန်သဘောတူ ဆိုက်သို့မဟုတ်ယင်း၏န်ဆောင်မှုများနှင့်ကုမ္ပဏီများရဲ့ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ထုတ်ကုန်ဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များသို့မဟုတ်တတိယပါတီမဆိုအခွင့်အရေးသည်သင်၏ချိုးဖောက်မှုသင့်ရဲ့ချိုးဖောက်မှုဒါမှမဟုတ်သက်ဆိုင်ရာဥပဒေသင့်ရဲ့ချိုးဖောက်မှုကိုခံစားဖို့။ ထိုသီးသန့်ကာကွယ်ရေးယူဆနိုင်ပြီးသင်သည်မည်သည့်ရရှိနိုင်ကာကွယ်ရေးအားကောင်းမောင်းသန်အတွက်ကုမ္ပဏီနှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်ရလိမ့်မည်။
Terminator နှင့် Access ကန့်သတ်
အဆိုပါစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၏အုပ်ချုပ်ခွင့်ဥပဒေကုမ္ပဏီဆိုင်ရာဥပဒေများစည်းမျဉ်းများပဋိပက္ခ မှလွဲ. ကို set up သည်အဘယ်မှာရှိတိုင်းပြည်များ၏ထိရောက်သောဥပဒေများဖြစ်ရလိမ့်မည်။ သင်ကစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအပေါငျးတို့သပြဌာန်းချက်မှအကျိုးသက်ရောက်ပေးမတရားစီရင်မှုအတွက်ဆိုက်ကိုမသုံးကြလိမ့်မည်။
အဘယ်သူမျှမဖက်စပ်, မိတ်ဖက်, အလုပ်အကိုင်, ဒါမှမဟုတ်အေဂျင်စီဆက်ဆံရေးမျိုးဆိုက်၏စည်းကမ်းချက်များကိုသို့မဟုတ်အသုံးပြုမှု၏ရလဒ်အဖြစ်သင်နှင့်ကုမ္ပဏီအကြားအဓိပ်ပာရလိမ့်မည်။
အဆိုပါစည်းမျဉ်းများအတွက်အဘယ်အရာကိုမျှဆိုက်သင့်ရဲ့ခံစားနှင့် ပတ်သက်. အစိုးရမဟုတ်သော, တရားရုံး, ရဲ, နှင့်ဥပဒေစိုးမိုးရေးတောင်းဆိုမှုသို့မဟုတ်လိုအပ်ချက်များနှင့်လိုက်နာရန်ကုမ္ပဏီ၏လက်ျာ၏ derogation ရလိမ့်မည်။
အဆိုပါသတ်မှတ်ချက်များကိုမဆိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသက်ဆိုင်ဥပဒေနှင့်အညီပျက်ပြယ်သို့မဟုတ်မပြုနိုင်ဖြစ်စိတ်ပိုင်းဖြတ် အကယ်. ထို့နောက်ပျက်ပြယ်သို့မဟုတ်မပြုနိုင်ဝါကျခိုင်လုံသောနှင့်အတည်ပြုဝါကျနဲ့အစားထိုးခြင်းယူဆပါလိမ့်မည်သည့်စည်းမျဉ်းများနှင့်အခြားအစိတ်အပိုင်းများနှင့်များ၏ကဏ္ဍများ၏မူလဗားရှင်းအလားတူဖြစ်ရလိမ့်မည် စည်းကမ်းချက်များကိုသင်နှင့်ကုမ္ပဏီသက်ဆိုင်ရလိမ့်မည်။
အဆိုပါသတ်မှတ်ချက်များကိုဆိုက်၏ခံစားနှင့် ပတ်သက်. သင်နှင့်ကုမ္ပဏီအကြားတစ်ခုလုံးကိုသဘောတူညီချက်တစ်ရပ်ကိုဖွဲ့စည်းနှင့်သတ်မှတ်ချက်များကိုသင်နှင့်ကုမ္ပဏီအကြား, အီလက်ထရောနစ်ပါးစပ်သို့မဟုတ်တိကျမ်းစာ၌လာသည်ဖြစ်စေ, အားလုံးကြိုတင်သို့မဟုတ်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ကမ်းလှမ်းမှုများပယ်ဖျက်အစားထိုးသည်။
အဆိုပါကုမ္ပဏီနှင့်၎င်း၏ affiliates နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအောင်မြင်မှုများ, သဘာဝဘေးအန္တရာယ်, ပိတ်ဆို့ခြင်း, ပိတ်ပင်ထားမှုကိုဖြေ, အဓိကရုဏ်း, အပြုအမူ, စည်းမျဉ်း, ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းအပါအဝင်ကုမ္ပဏီရဲ့ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ထိန်းချုပ်မှု ကျော်လွန်. မဆိုအကြောင်းမရှိမှရှိရာပျက်ကွက်သို့မဟုတ်နှောင့်နှေးရလဒ်များကို၎င်း၏တာဝန်ဝတ္တရားဖြည့်ဆည်းရန်ပျက်ကွက်သို့မဟုတ်နှောင့်နှေးမှုအတွက်ထိုက်မဖြစ်ရကြလိမ့်မည် အစိုးရ, အကြမ်းဖက်လုပ်ရပ်များ, စစ်, ဒါမှမဟုတ်ကုမ္ပဏီရဲ့ထိန်းချုပ်မှုပြင်ပရှိအခြားမည်သည့်အင်အားစု၏, ဒါမှမဟုတ်အမိန့်။
အဆိုပါကုမ္ပဏီနှင့်ဆိုက်သို့မဟုတ်အခြားဆက်စပ်ကိစ္စများနှင့်စပ်လျဉ်းသငျသညျ, သို့မဟုတျစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအကြားလုပ်ဆောင်ချက်အငြင်းပွားစရာများ, တောင်းဆိုချက်တွေ, တောင်းဆိုမှုများ, အငြင်းပွားမှုများ, ဒါမှမဟုတ်အကြောင်းတရားများ၏အမှု၌, သင်နှင့်ကုမ္ပဏီထိုကဲ့သို့သောအငြင်းပွားဖွယ်, တောင်းဆိုချက်တွေ, တောင်းဆိုမှုများ, အငြင်းပွားမှုများကိုဖြေရှင်းရန်ကြိုးစားရန်သဘောတူ ကောင်းသောယုံကြည်ခြင်းတရားကိုညှိနှိုင်းအသုံးပြုပုံနှင့်ထိုကဲ့သို့သောညှိနှိုင်းမှု၏ကျရှုံးခြင်း၏အမှု၌, သီးသန့်ကုမ္ပဏီထူထောင်သည်အဘယ်မှာရှိတိုင်းပြည်တရားရုံးမှတစ်ဆင့်လုပ်ဆောင်ချက်, ဒါမှမဟုတ်အကြောင်းတရားများ။
ငါတို့သည်သင်တို့၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဆောင်းမှုသို့မဟုတ်အသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးမည်သည့်တိုင်ကြားမှုများကိုဖြေရှင်းမှကျူးလွန်နေကြသည်။ : သင်သည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များနှင့် ဆက်စပ်. ၌ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလေ့အကျင့်နှင့်စပ်လျဉ်းတိုင်ကြားချက်စေလိုပါလျှင်မှာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် info@investingstockonline.com ။ ကျနော်တို့ရက်ပေါင်း 30 အတွင်း, အဖြစ်မကြာမီကျနော်တို့တတ်နိုင်သမျှနှင့်မည်သည့်ဖြစ်ရပ်၌ရှိသကဲ့သို့သင့်ရဲ့တိုင်ကြားချက် reply ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ဆိုတိုင်ကြားချက်ကိုဖြေရှင်းဖို့မျှော်လင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုမှဆောင်ခဲ့သဖြင့်, သင်သည်သင်၏တိုင်ကြားချက်လုံလောက်စွာဖြေရှင်းရသေးဟုခံစားရသို့သော်လျှင်, သင်သည်သင်၏ဒေသခံဒေတာများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကြီးကြပ်ရေးအခွင့်အာဏာကိုဆက်သွယ်ပိုင်ခွင့်ကိုကြိုတင်စာရင်းသွင်း
ကျနော်တို့ကဒီစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် ပတ်သက်. သင်၏မှတ်ချက်များသို့မဟုတ်မေးခွန်းများကိုကြိုဆိုပါတယ်။ သငျသညျမှာစာအရေးအသားအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်စခွေငျးငှါ info@investingstockonline.com